सुजतामाथि मात्रै सत्तोसराप किन ? - Ratopati
सुजतामाथि मात्रै सत्तोसराप किन ?
- | दीपक सङ्गम थापा
नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ सुजता कोइराला यतिबेला क्यान्सरसँग जुधिरहेकी छिन् । भलै उनी नेपालकी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं उपप्रधान मन्त्री हुन् । उनी अहिले बिरामी छिन्, उनलाई अहिले साथ, सहयोग माया र उपचारको खाँचो छ । उनलाई उपचार गर्न केही रकमको आवश्यकता छ । उनको उपचारका लागि उनको धनपैसा प्रर्याप्त छ छैन उनैले जानुन । तर मुख्य सवाल उपचार खर्चको कुरा जोडिएको छ पछिल्लो समय । सुजताले स्तन क्यान्सर उपचारका लागि राज्यकोषबाट सहयोग माग्नु कुनै नौलो कुरा होइन । सुजताले उपचार गर्न आफ्नै पैसाले सक्दिनन् र ? भन्ने अर्थमा नौलो होइन । सबैले चाहेको समयमा पैसा कहाँ हुन्छ । कुनै बेला उनीसँग प्रशस्त थियो होला तर अहिले नहुन पनि सक्छ ।
बिरामी, जुवा हारेको मान्छे र मादक पदार्थ सेवन गरेको मान्छेसँग रिसाउनु हुँदैन भनिन्छ । तर अहिले त्यही भइरहेको छ । सुजता अहिले कसरी उपचार गरौँ र निको भएर देशको सेवा गरौँ भन्नेमा छिन् । तर एकथरी मान्छे भने सुजताको मर्म र भावना नै नबुझी एकहोरो तरिकाले गालीका वर्षाले कोर्रा हानिरहेका छौँ । आफैमा बिरामीलाई सान्त्वना चाहिन्छ । साथ, सहयोग, माया र उपचार चाहिन्छ तर उनलाई अहिले त्यो नभएर ठीक उल्टो कार्य गरिरहेका छौँ । के सुजताले मात्र उपचार खर्च लिएकी हुन् ? धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो जस्तै सुजतालाई मात्र किन गालीका वर्षा ? सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनलगायत र चोकचोकमा पनि सुजताकै चर्को विरोध भइरहेको छ । उनलाई यसरी गालीका वर्षा हिर्काउने एउटै कारण के भने उनले उपचार खर्च राज्यबाट मागिन भन्ने ? राज्यबाट उपचार खर्च माग्नु के अपराध हो ? के उपचार खर्च माग्दैमा हामी नेपाली डुब्छौँ ? के उनले भ्रष्टाचार गर्नलाई मागेको हो ? के त्यो रकम रहरले मागेकी हुन् ? के सुजताले ऐस आरामका लागि मागेकी हुन् ? यस्ता कुरामा पनि हामीले विचार गर्नुपर्दछ । अहिले सुजता कोइरालालगायतका नेताहरुले राज्यकोषबाट उपचार पैसा लिएको भन्दै जताततै विरोधका नाममा घिनलाग्दा शब्दहरु प्रयोग भइरहेका छन् । सके सरकारले सबै जनतालाई निःशुल्क उपचार गर्ने हो नसके विशेष सहुलियत दिनुपर्दछ । त्यो सबैलाई थाहा छ । राज्यकोषबाट सबै सबैले त कहाँ उपचार खर्च पाउँछन् र ?
सुशील, केपी, प्रचण्डलगायतले राज्य कोषबाट उपचार खर्च पाउँदैमा केही बिग्रिदैन । यी हाम्रा देशका सम्पत्ति हुन, धरोहर हुन् । यी सम्पत्ति मात्र होइनन् संसारका नेताहरुमध्येका नेताहरु पनि हुन् । नेपाल र नेपालीहरुको बागडोर सम्हाल्नेहरुलाई जोगाउनु हामी सबैको धर्म हो । तर अर्को कुरा हामी अदृश्यबाट अरर्बौं भ्रष्टाचार गरेको देख्दैनौँ । उपचारका लागि लाख मात्र माग्दा र लिँदा पनि यत्ति धेरै आक्रोशित किन ? कतिपयले त नेताहरुलाई बचाऔँ भन्दै उपचार खर्च भनेर व्यङ्ग्य स्वरुप एक रुपिया सङ्कलन गर्न थालिसके । यो व्यङ्ग्य मलाई त्यति जायज लागेको छैन । भलै राज्यकोषबाट धेरै खर्च मागियो भन्ने आक्रोश हुन सक्छ ।
बरु सरकारले धेरै दिन नसकिएला । तर पछिल्लो समयमा गगन थापाले १५ लाख मात्रै दिने भन्ने त विधेयत त ल्याउँदै छन् । विधयक पारित हुन दिऔँ । त्यसपछि पनि विधेयकको उल्लङ्घन गर्ने र करोडौँ माग्नेलाई विरोध गर्न सुहाउँछ । मलाई लाग्छ नेपालका नेताहरुले लिन मात्र होइन दिन पनि जानेका छन् । नेपाली जनताहरुलाई संविधान र राष्ट्रियताका लागि शिर ठाडो बनाइदिएका छन् भने विदेशी अनुदान पनि भित्र्याएका छन् । यी नेताहरुले के नेपाल र नेपालीहरुका लागि काम गरेका छैनन् ? नेपालमा सुजता र उनका बुवाको पनि कम योगदान छैन । चाहेको भए गिरिजा छँदै करोडौँ लिन्थिन् होला सुजताले । उनले त्यसो गरिनन् । मान्छेले कमाउनलाई, जम्मा गर्नलाई राज्यकोषबाट लिने होइन, भ्रष्टाचार गर्नलाई उपचार खर्च माग्ने होइन । उपचार खर्च भनेपछि उपचार नै हो । उपचारका लागि पैसा माग्दैमा हामीहरुले त्यतिका घृणा गर्ने होइन । नेताहरुलाई बचाआँै । नेताहरु बिरामी भए भने हामी र हाम्रो देशलाई नै घाटा हुने हो ।
विरोध गर्नुहुन्छ भने ६०१ सभासदहरुले संविधानको नाममा अर्बौं होइन, खरबौं रकम लुटिरहेका छन् । त्यो विरोध गर्नुहोस्, त्यतिमात्र होइन सभासदको तलब ५५ हजारबाट ९७ हजारमा पुर्याउँदैछन् । त्यो विरोध गर्नुहोस् । विदेश शयरका नाममा दैनिक करोडभन्दा बढी रितिन्छ । त्यसको विरोध गर्नुहोस् । सभासद र मन्त्रीहरुले राज्यकोषकै रकमबाट चिल्ला गाडी चढिरहेका छन्, त्यसको विरोध गर्नुहोस् । देशका ठेक्कापट्टामा अरबौँका लागत भन्दा ३ गुणा बढी मूल्याङ्कन गराएर आँखा अगाडि वैधानिक बनाएर करोडौँको कमिसनको खेल हुन्छ, त्यो विरोध गर्नुहोस् । अर्को कुरा सुजताले मात्र लिएकी होइनन् । अरुहरुले पनि लिएका छन् । बिरामी उपचार खर्च सबैले लिने होइन, बिरामीले मात्र लिने हो । पैसाले के के गर्न मिल्छ, त्यो त्यो गर्नुपर्दछ ।
पैसाको अभावमा कुनै बिरामी तलमाथि भयो भने त्यो पैसाको के काम ? पैसालाई काममा लगाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । तर सही काममा । अहिले पनि नेपालका ठूलठूला बैङ्कहरुले खरबौँ कमिसन खाइरहेका छन् । बैङ्कमा खरबौँ रकम थन्किएको छ । के गरिब जनताका लागि त्यो पैसा परिचालन छ ? एकपटक सोच्नुहोस् । विचरा एउटी क्यान्सर पीडित, मिर्गौला पीडित बिरामीलाई सत्तासराप गर्दैमा के पाउँछौँ हामी ? बिरामीमाथि सत्तासराप गर्ने हामीलाई कसले सिकायो ? के नेपाली संस्कार यही हो ?
हाम्रो देश र जनताको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता हुनुभएन । देशलाई बर्बाद हुने काम गर्नुभएन । त्यसको पो विरोध गर्ने हो त ? यसको मतलव राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने भनेको होइन, राज्यका लागि विशेष योगदान गर्नेहरुलाई त हामीहरुले पनि भुल्नुभएन । सुजताले पनि उपचार पाउनुपर्दछ । ती कालिकोटका कुपोषण पीडित बालबालिकाहरुले पनि उपचार पाउनुपर्दछ । मुगुका बिरामीहरुले पनि उपचार पाउनुपर्दछ ।
रोल्पा रुकुमका द्वन्द्वपीडितहरुले पनि उपचार त पाउनै पर्दछ । तराईका बिरामीहरुले पनि उपचार पाउनुपर्दछ । बिरामी मान्छे उपचार गरे पो स्वस्थ भइन्छ र काम गर्न सकिन्छ । फेरि उपचार त आफैमा स्वस्थ हुने काम हो । उपचार गर्नु नै राम्रो पक्ष हो । त्यसैले सत्तासराप नगरौँ । बिरामीलाई उपचार गरौँ त्यसपछि देशलाई पनि उपचार गरौँ । कि कसो ?